Haddii aad tahay lover music ama enthusiast markaas waa in aad ku baraarugnaa muhimadda ay keliya hal madal kaas oo kuu ogolaanaya inaad si loo helo download jecel raadkaagu ama heeso ka mid ah liiska doorashooyinka joogo. Laakiin dajinta kuma filna; madal waa in sidoo kale uu ku siinayaa fursado ku filan oo song waa in ay leeyihiin maktabad balaadhan oo ah kuwan raadkaygay uu ka soo xusho. Tani waa waxa matoorada torrent music search sameeyo. Dhufto ee suurtogelin in aad kala soo bixi files torrent oo markaas lagu rakibi karo iyadoo la isticmaalayo Softwares torrent aad kombuutarka. Liiska 10 music ah matoorada sare torrent raadinta soo socda waa:
Qaybta 1.Top 10 Search matoorada Music Torrent
Qaybta 2.Torrent Alternative - Music downloader
1. Kickasstorrents-tan madal la aasaasay sannaddii 2009 iyo tan iyo markaas waxa uu abuuray cadhaysan internet-ka. Waxay bixisaa xulashada ugu kala duwan ee heeso iyo filimaan uu ka soo xusho oo waa ka aamin halkaas oo aad ka heli kartaa kuwan raadkaygay cusub iyo kii hore naftaada boosteejo ah. Waa lacag la'aan ah oo ah qiimaha laakiin waxaa laga yaabaa inaad mar mar ayey dhibaatooyin ka fool helo song saxda ah aad rabto. Had iyo jeer akhri comments iyo dib-files ka hor waxaad kala soo bixi in ay ka fogaadaan wax kasta oo soo degsado waa jabtay, cudurka ama kaliya ma waxa aad raadineysay.
2. Torrentz-tani weli waa torrent music engine kale raadinta fiican oo aad ku helayso natiijooyinka raadinta Bittorrent iyo waa ku farxi wayn ee kuwa raadinayso ku sifayn ama category heesaha. Ka sokow soo bandhiga files torrent, waxaa sidoo kale isticmaala inay meelo kale oo internetka oo laga yaabaa in aad natiijooyinka raadinta la doonayo. Ka sokow baaritaan pop diiqayo oo ku soo kacay kasta oo hadda ka dibna, this site waa aamin iyo ammaan in la isticmaalo.
3. Extratorrent-this site torrent download helayaa badan oo dardar iyo caan maalmahan oo la og yahay in guriga si ETTV oo caan ah iyo kooxaha daayo ETRG. Goobta waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo ay ka kooban tahay ururinta balaadhan oo ah gabayo ka tirsan qaybaha kala duwan oo ay ku jiraan classic, Oo dhagax weyn, pop, jazz iyo kuwa kale. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa comments siiyey isticmaala si aad u raadinta fududayso.
4. Pirate Bay-tan music torrent search engine qiyaastii sanado badan oo weli ugu cadcad taageerayaasha ay daacad. Waxaa hadda u shaqeeya iyada oo clones iyo nuqulada laakiin ma maamuli si ay u bixiyaan badan oo kala duwan iyo ururinta kuwan raadkaygay heeso iyo filimaan inay dalka baadhaan oo ka soo dejisan. Oldpiratebay.org waa Gadzhiyev oo hadda ugu caansan ee this site iyo beegantay darajo 4aad liiskan.
5. YTS-ka music aad u cusub in Classics jir iyo ka kuwan raadkaygay ka tirsan albums oo caan ah kuwa ay fanaaniinta yar loo yaqaan, madal taas waxay keentaa oo dhan adiga iyo in sidoo kale iyada oo loo marayo boosteejo ah oo nadiif ah oo si sahlan loo isticmaali. Qeybta ugu wanaagsan ee ku saabsan this site waa in ay timaado la dib u eegista user iyo comments si aad go'aan gaari karin dajinta aad si taxadar leh. Bogga waxaa kaloo ku hoy u tahay filimada aan la tirin karin, laakiin ay ururinta song waa si fudud looga adkaan.
6. Izohunt.to- Izohunt.to la bilaabay sannaddii 2013 taas oo ahayd qiyaastii 2 todobaad ka dib markii Isohunt.com waxaa lagu xidho. Goobta laga yaabo in aanay xiriir la leh jir Isohunt laakiin waxay maamushaa oo xaqiiqo ah ayaa rajeynaya inay sii jinniyadu nool. Madal Tani waxay sidoo kale kuu soo music ururinta ubalaadhan oo waa ammaan iyo fududahay in la isticmaalo. Waxaad ka heli bar weyn raadinta ee sare ee bogga guriga halkaas oo aad ka geli karto goobitaankaaga iyo daweeyaan ururinta weyn ee fursadaha suurto gal ah. Had iyo jeer akhristo dib files torrent hor duuban si looga fogaado degsado daadkii jabay ama cudurka.
7. Limetorrents-Limetorrents.cc ayaa sidoo kale jirtay sannado badan, ayaa soo ururay daacadda u ah qaar ka mid ah inta lagu jiro waqtigan aan ku jirno. Waxaa la soo dacweeyay tiro dhowr jeer ah, laakiin mar walba soo booda mar kale kuu soo bandhigi ay maktabadda weyn ee heeso iyo files torrent music. Ka taxadar gujinaya links qaldan ama arbushin ilaa xayeysiis sida kartaa inay sameeyaan waxa ay kugu adkaato inaad dhirtuba aad cuncun iyo. Warka wanaagsan si kastaba ha ahaatee waa in this site waa bilaa lacag.
8. Bitsnoop-kani waa mid ka mid ah ugu weyn jirrabo Bittorrent oo joogto ah u koraya iyada oo maalin kasta marayay. Thanks to Sababtan awgeed, waxaad ka heli kartaa dhamaan heeso aad waligaa maqashay oo aad dooneyso inaad kala soo baxdo dalka dhex. Laga soo bilaabo music dhagax weyn in Classics jir ah oo ka soo music pop dadka kale, Halkan wax aad ka heli karto. Waxa ugu wanaagsan waa in aad sidoo kale ka raadin kartaa music aad jeceshahay u qora magaca artist ama album ah. Waa ay fududahay in la isticmaalo, ammaan iyo aad u amaan ah. Waxaad dooran kartaa qaybta 'audio' ee bogga guriga in ay ku talaabsato baaritaan music.
9. Torrenthound-Haddii aad raadinayso music oo aadan awoodin in aad ka heli meel kasta oo kale, ka dibna tan torrent search engine tijaabiyo kaamil ah oo aad u. Waxaa kaalinta sare ee qiimeynta bilaha Alexa iyo maamushaa in aad ka bixin fudud ah si ay u isticmaalaan interface aad u baahantahay oo music search oo dhan. Marka aad soo booqato goobta, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan tirada daadkii cusub lagu daray maalin kasta oo wuxuu idin ​​siin doonaa fikrad ah awoodaha goobta ee. Iska ilaali gujinaya links untrusted ama commercials siiyo goobta si looga fogaado degsado fayrusyada kasta.
10. Torrentreactor-dhaafay, laakiin hubaal ma ugu yaraan ku liiskan matoorada torrent raadinta waa TorrentReactor. Boggan waxa uu leeyahay interface fudud iyo halkii Caraabaah oo raadinaya page guri laakiin ha u ah in aad Doqon. Waa maxay been gudaha waa maktabad balaadhan oo heeso iyo filimaan kuwaas oo kaa caawin kara dunida iyo buffs ka dhergin jeelkii. Waxayna raadiyeen lagu sifeeyay karo oo ku saleysan fanaaniinta, heeso, albums, sanadkii sii daayo oo waa wax fudud in aad ka raadin iyo files download torrent. . Qaybood ayaa waxaa la siiyaa dhinaca bidix ee boga guriga aad ku soo koobto aad raadinta
Qaybta 2.Torrent Alternative - Music downloader - TunesGo
Free Music Torrent Goobaha ama Apps in Goobidda iyo Download daadkii Music
> Resource > Music > Top 10 Search matoorada Music Torrent (ee pc)